Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.3.3 Peer-to-macay
Peer-to-Patent waa wicitaan furan kaas oo ka caawiya baarayaasha in ay helaan farshaxanka hore; waxay muujinaysaa in wicitaanada furan ee loo adeegsan karo dhibaatooyinka aan la aqbalin qiimeynta.
Baadhista Patentku waxay leeyihiin shaqo adag. Waxay helayaan sheekooyin qarsoodi ah oo khuseeya waxyaabo cusub, ka dibna waa in ay go'aamiyaan haddii khibraddaas la sheegay ay "novel." Taasi waa, imtixaan qaaduhu waa inuu go'aamiyaa haddii ay jirto "farshaxan hore" - oo hore loogu sharraxay qaabka naqshadkan-oo bixinaya Patentka la soo jeediyay ayaa ansax ah Si aad u fahamtid sida geeddi-socodka u shaqeynayo, aynu ka fekerno imtixaan-baadhaha oo loo yaqaan Albert, oo lagu magacaabo Albert Einstein, oo bilaabay inuu bilawdo Xafiiska Patentiga Swiss. Albert wuxuu heli karaa codsi sida Maraykanka Patent 20070118658 oo uu xareeyay Hewlett Packard si loogu magacaabo "Feejignaan loo adeegsado maaraynta taleefanka" waxaana lagu faahfaahiyay buug-gacmeedka Bethikieck ee ' Wiki Government' (2009) . Waa kuwan codsiga koowaad ee arjiga:
"Nidaam computer A, oo ka kooban: a processor, aqbasho nidaamka aasaasiga ah / wax soo saarka (BIOS) oo ay ku jiraan tilmaamaha macquulka ah oo, marka toogasho ah by processor ka, reserved processor in: bilaabo awood on imtixaanka is (POST) processing nidaamka aqbasho / saarka aasaasiga ah ee qalabka kombiyuutarka ah, mid ka mid ah la joogo ama qaabab heegan maamulka badan oo interface user a; heli signal doorashada ka interface user aqoonsado mid ka mid ah qaabab heegan maamulka bandhigay interface user ah, iyo reserved qalab ku xidhay in nidaamka kombiyuutarka la format maamulka aqoonsaday heegan ah. "
Miyay Albert la siiyaa xuquuqda monopoly 20-sano ee patentkan ama uu jiray fanka hore? Dhibaatooyinka ku jira go'aamada badan ee patentku waa kuwo aad u sarreeya, laakiin nasiib daro, Albert waa inuu sameeyaa go'aankan iyada oo aan jirin wax badan oo macluumaad ah oo uu u baahan karo. Sababtoo ah taageerada weyn ee ladagaallanka ah, Albert wuxuu ku shaqeeyaa cadaadis xoog leh oo waa inuu go'aankiisa ku saleeyaa 20 saac oo shaqo ah. Dheeraad ah, sababtoo ah baahida loo qabo in la ilaaliyo qarsoodiga la soo jeediyey, Albert lama oggolyahay in uu la tashado khabiiro ka baxsan (Noveck 2006) .
Xaaladdan ayaa ku dhuftay Professor Beth Noveck sida gebi ahaan jebiyey. Bishii Luulyo 2005, oo qayb ahaan lagu dhiirigeliyay Wikipedia, waxay abuurtay barta blogka ee cinwaankeedu yahay "Peer-to-Patent: A Modest Proposal" kaas oo ku baaqay nidaam dib-u-eegis u-furan oo loogu talagalay patents. Ka dib markii lala kaashaday Xafiiska Patent and Trademark ee Maraykanka iyo shirkadaha tiknoolajiyadeed ee sida IBM, Peer-to-Patent waxaa la bilaabay bishii Juun 2007. Qiyaastii 200 oo sano oo xarig ah oo dawladdu leedahay iyo kooxo qareen ah ayaa u muuqda meel aan u fiicnayn innovation, laakiin Peer-to-Patent wuxuu qabaa shaqo qurux badan oo lagu dheelli-tirayo danta qof kasta.
Jaantuska 5.9: Iskudhafka Shaqada Lahaanshaha. Waxaa laga soo saaray Bestor and Hamp (2010) .
Halkan sida ay u shaqeyneyso (Jaantuska 5.9). Kaddib marka uu khabiirku ogolaado inuu codsigeeda la socdo dib-u-eegida beesha (wax badan oo ku saabsan sababta ay u sameyn karto isla markaa), arjiga waxaa lagu dhejiyaa websaydh. Marka xigta, arjiga waxaa ka doodaya dib-u-eegayaasha beesha (mar labaad, wax badan oo ku saabsan sababta ay uga qaybgeli karaan daqiiqad), iyo tusaalooyinka suurtagalnimada farshaxanka hore, ku qoran, oo lagu dhajiyay website-ka. Nidaamkan doodda, cilmi-baarista, iyo ku-dhajinta ayaa sii socota, illaa dhammaadka, bulshooyinka dib-u-eegista cod-bixiyeyaasha si ay u doortaan 10-ka mid ee ugu tuhunsan ee farshaxanka hore ee loo soo diray ka dibna loo diro imtixaanka baaritaanka ee baaritaanka. Baadhis-baadhaha ayaa markaa kaddib baadhaya cilmi-baariskiisa, isla mar ahaantaasna waafaqsanaanta ka-qayb-qaadashada Peer-to-Patent qeexaya xukunka.
Aan ku laabano US Patent 20070118658 ee "Habka digniinta isticmaalaha ee user-ka." Patent-ka waxaa loo direy Peer-to-Patent bishii Juun 2007 halkaas oo uu akhriyay Steve Pearson, oo ah injineerna sare ee software IBM. Pearson wuxuu yaqaan jaantuskan cilmi-baarista oo lagu qeexay qayb ka mid ah farshaxanka hore: buug ka yimid Intel oo cinwaankiisu yahay "Teknoolajiyada Fulinta Fulinta: Hagaha Tilmaamaha Degdegga ah" ee la daabacay laba sano ka hor. Isku-dubaridan dukumintigan, iyo sidoo kale farshaxanka kale ee hore iyo doodda ka timid bulshada Peer-to-Patent, baadhaha baarista ayaa bilaabay dib u eegis dhamaystiran kiiska, ugu danbeyntii wuxuu soo saaray codsiga patent, qayb ahaan sababtoo ah buuga Intel waxaa ku yaal Pearson (Noveck 2009) . 66 ka mid ah kiisaska soo dhameeystiray Peer-to-Patent, ku dhowaad 30% ayaa loo diiday in lagu saleeyo farshaxanka hore ee laga helo Peer-to-Patent (Bestor and Hamp 2010) .
Maxaa ka dhigi kara naqshadda Peer-ilaa-Patent gaar ahaan xarrago waa habka ay dadku u helayaan danaha badan ee isku dhafan ee wada cayaaraha oo dhan. Inventors waxay heystaan ​​dhiira galin in ay kaqeybqaataan sababtoo ah xafiiska patentku wuxuu dib u eegayaa codsiyada Peer-to-Patent si ka dhakhso badan oo ka mid ah joornaalada ayadoo la marayo nidaamka dib u eegista qarsoodiga ah. Dib-u-eegayaashu waxay leeyihiin dhiira-galin si ay uga-qayb-galaan si looga hortago jilidda xun, kuwo badanina waxay u muuqdaan inay helaan hab-raaca farxad leh. Ugu dambeyntii, xafiisyada patentka iyo baaritaanada baaritaanku waxay leeyihiin dhiira galin in ay kaqaybqaataan sababtoo ah habkan kaliya wuxuu hagaajin karaa natiijooyinkooda. Taasi waa, haddii nidaamka dib-u-eegista beesha uu helo 10 qaybood oo aan faaiido lahayn ee farshaxanka hore, qaybaha aan caawimaad lahayn waxaa laga yaabaa in la iska indha tiri karo imtixaanka baaritaanka. Si kale haddii loo dhigo, baaritaanka Patent-ka iyo baaritaanka shakhsiyadeed ee wadajir ah waa in uu ahaado mid ka wanaagsan ama ka wanaagsan marka loo eego baaritaanka anshaxa ee ka shaqeynaya go'doominta. Sidaa daraadeed, wicitaanada furan had iyo jeer ma badalo khubarada; Mararka qaarkood waxay ka caawiyaan khabiirada in ay shaqadooda si fiican u shaqeeyaan
Inkasta oo Peer-ilaa-Patent ay u muuqan karto ka duwan tahay Netflix Prize iyo Foldit, waxay leedahay qaab isku mid ah oo xalalkaas u sahlan si loo eego intii ka dhalatay. Marka qof uu soo saaro buug-gacmeedka "Tiknoolajiyada firfircoon ee dhaqdhaqaaqa: Hagaha Tilmaamaha Degdegga ah" waa sahlan-u-imtixaan baaris ah, ugu yaraan-si loo xaqiijiyo in dukumiintani ay tahay farshaxan hore. Si kastaba ha ahaatee, helitaanka buuggan waa mid aad u adag. Peer-to-Patent waxay kaloo muujineysaa in mashaariicda furan ee furan ay xitaa suurtagal tahay xitaa dhibaatooyinka aan caddayn qiyaasta.